Duufaanta Ana ayaa timid Spain | Saadaasha Shabakadda
Waxay umuuqatay inaysan imaanaynin, laakiin ugu dambayntii waxay umuuqataa in xilligii duufaannadii waaweynaa ee Spain ay bilaabmeen, waxayna ku sameysay si cajiib ah. Waxaa jira digniino ku saabsan 43 gobol oo loogu talagalay dabaysha ugu badan ee dhici jirtay oo mar kale noqon karta 150 kiilomitir saacaddii.
Xilligan, kuwani waa waxyeelada ay geysteen duufaanta Ana, kan ugu horreeya oo leh magac.
4 Dalka intiisa kale
Sawirka - Farodevigo,
Inti shalay oo Axad ahayd, Diseembar 10, 2017, roobab ka badan ayaa la diiwaangeliyey guud ahaan bishii Noofambar ee la soo dhaafey, taas oo sababtey qulqulka webiyadeeda, kuwaas oo illaa maalmo yar uun ka hor gebi ahaanba qalalan. Dheeraad ah, dabeylo dabeyl wata oo gaaraya illaa 140km / saacaddii ayaa in ka badan 20.000 oo macaamiil ah ka dhigey koronto la’aan: 11.700 gudaha Pontevedra, 5.000 A Coruña, 3.000 Ourense, 320 Lugo, iyo inta kale magaalooyinka sida Noia, Mazaricos ama Porto do Son.
Sawir - Lavanguardia.com
Laga bilaabo 22.00-ka habeennimo ee Axadda illaa 8-da subaxnimo ee Isniinta, Dab-damiska ayaa fuliyay toban waxqabad Dhul go'an oo dhacday awgood, labadaba boodhadh, laamo geed iyo walxaha wajiyada laf ahaantooda iyo natiijada dooxooyinka biyaha ee ay reebeen roobabka daran.
Jasiiradaha Balearic 'Ana' ayaa ka tagay dhacdooyin badan. Dabaylo ilaa 90 km / saacaddii ah ayaa ku soo rogmaday badda, taas oo ka dhigaysa isku socodka taraafikada xeebta mid aad u khatar badan. Magaalo madaxda gobolka, Palma, ayaa dhibbane loo ahaa daadadka, gogosha iyo geedaha dhacaya.
Dalka intiisa kale
Inkastoo aysan jirin wax dhaawacyo ah, gobolada kala duwan sida Andalus, duulimaadyada waa in la leexiyo oo la joojiyo. Marka, nasiib wanaag, 'Ana' waa duufaan kaliya naga tagtay waxyeelo maadi ah.
Wuxuu hadda ka tagayaa dalka si uu u aado Denmark, oo xarunteeda la filayo inay gaarto 1-da duhurnimo ee maanta. Laakiin awood uma lihi inaan hoos u dhigno waardiyeheenna, maaddaama ay soo socdaan wejiyo hor leh oo hoos u dhigaya heerkulka mar labaad isla markaana keena roob.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaanta Ana ayaa timid Spain